कालो ढुसीको संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु, उपचारका लागि छैन औषधि - Akhabarpatra
कालो ढुसीको संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु, उपचारका लागि छैन औषधि
कोरोना महामारीबाट ठूलो मानवीय क्षति भइरहेको बेला कालो ढुसीको संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
बिहीबार कैलालीको बर्दगोरिया–६ का ६५ वर्षीय पुरुषको म्युकर माइकोसिस अर्थात कालो ढुसीको संक्रमणबाट मृत्यु भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
वीरगञ्जमा कालो ढुसीसँग मिल्दोजुल्दो संक्रमण तीन जनाको मृत्यु भइसकेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर परीक्षण नगरिएका कारण पुष्टि हुन सकेन । धनगढीको सेती अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिमा भने कालो ढुसीको संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
कोरोना महामारीका बेला अर्को खालको दुर्लभ रोग देखापर्नुले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अर्को चुनौति थपिएको जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार करिब एक दर्जनमा कालो ढुसीको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । जनस्वास्थ्यविद्हरुले एक महिनाभित्रमा डेढ सय जनामा यसको संक्रमण देखा पर्न चेतावनी दिइसकेका छन् ।
शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डा योगेश न्यौपानेले एकाध महिनामा संक्रमण बढेर डेढसयको संख्यामा पुग्ने अनुमान गर्छन् । तर यसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि अभाव छ ।
सेती अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठका अनुसार मौज्दात रहेको औषधि बुधबार कालो ढुसीको संक्रमण पुष्टि भएको व्यक्तिलाई दिइएको थियो । अब थप संक्रमण आए औषधि छैन । औषधि उपलब्ध गराउन आज बिहीबार मात्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले कालो ढुसीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि अभाव रहेको स्वीकार गर्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को सिस्टमबाट औषधि ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।
आगामी ५ तारिखभित्र यो औषधि नेपाल आइपुग्ने उनले बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागलाई १० हजार भाइल उपलब्ध गराउन भनेका उनले बताए । तर डब्लूएचओले फस्ट लटमा ३००० भाइल मात्र उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको उनले बताए ।
एकहजार भाइल कालाजारका बिरामीका लागि नियमित आउने गरेको भन्दै उनले तीन हजार एडिसनलको रुपमा आउँदा तत्कालका लागि राहत मिल्ने उनको तर्क छ । औषधि ल्याउनका लागि उडान पनि नियमित नभएका कारण औषधि आउन ढिलाइ भएको उनले बताए ।
बाँकेको भेरी अस्पतालमा पनि कोभिड–१९ का बिरामीमा कालो ढुसीको संक्रमण भेटिएको अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डेले बताए । कालो ढुसीको संक्रमण भेटिए पनि यसको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको अभाव रहेको उनले बताए । औषधि उपलब्धताका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको उनले जानकारी दिए ।